Dowladda Canada ayaa lagu wadaa inay soo saarto raaligelin iyo magdhw la siinayo Cumar Khadr | SalaxleyTV
Sanaddii 2010, ayaa maxamada sare ee dalka Canada waxa ay gudoomisay in markii su’aalaha la waydiinayay Khadr uu la kulmay xaalad cadaadis ah.
Mar wax laga waydiiyay ra’isul wasaaraha Canada Justin Trudeau, ayaa ka gaabsady oo aan wax faahfaahin ah ka bixin arrintan.
Khadr, oo ahaa maxaabiiskii ugu da’da yaraa ee ku xirnaa Xabsigaasi ku yaalla Cuba ,ayaa dadka ka soo horjeeda xabsiga Guantanamo Bay waxa uu kiiskisa u noqday mid shaac baxa islamarkana soo jiitay dareenka caalamka.
Sanaddii 2010, ayaa maxkamadda sare ee Canada waxay sheegtay in qaabkii ay dowladda Canada ula tacaashay kiiska la xiriira Khadr aysan xaqiijin mabaa’diida gundhiga u ah caddaalada “ayna ku tumatay xuquuqdiisa dastuuriga ah .
Omar Khadr and his lawyerLahaanshaha sawirkaREUTERS
Cumar Khadr (midig) wuxuu toban sano ku qaatay Guantanamo Bay
Wax uu xiligaas sheegay Khadr in dadka ree Canada uu u muujin doono in uu yahay “Qof wanagsan “.
Khadr ayaa ah wiil uu dhalay nin la sheegay in ay si aad ah isugu dhawaayeen Cusama Bin Laden waxana la sheegay in uu ku milmay kooxaha mintidiinta xili ay da’diisu aad u yareyd.
One thought on “Dowladda Canada ayaa lagu wadaa inay soo saarto raaligelin iyo magdhw la siinayo Cumar Khadr”